Mamoa voa tsara - Church of the World of God Switzerland
lahatsoratra > Miresaka momba ny fiainana > Mamoa voa tsara
Kristy no voaloboka, isika no sampany! Ny voaloboka dia nojinjaina mba hanaovana divay nandritra ny an'arivony taona. Mandreraka be izany satria mila tompon'ny efitra ambanin'ny tany za-draharaha, tany tsara ary fotoana tonga lafatra. Ny mpamboly dia manapaka sy manadio ny voaloboka ary mijery ny masaka ny voaloboka mba hamaritana ny fotoana marina fijinjana. Asa mafy izany, fa rehefa mitambatra izany rehetra izany dia mendrika ny ezaka. Fantatr’i Jesosy ny momba ny divay tsara. Ny fahagagana voalohany nataony dia ny nanova ny rano ho divay tsara indrindra nandramana. Ny zava-dehibe aminy dia mihoatra noho izany.Ao amin’ny Filazantsaran’i Jaona dia mamaky ny fomba filazalazany ny fifandraisany amintsika tsirairay avy isika: “Izaho no tena voaloboka, ary ny Raiko no mpamboatra voaloboka. Ny sampako rehetra izay tsy mamoa dia esoriny; ary izay rehetra mamoa dia hodioviny mba hamoa bebe kokoa » (Jaona 15,1- iray).
Toy ny voaloboka mahasalama i Jesosy dia manome antsika tanjaka tsy miovaova ary ny rainy dia miasa toy ny tanimboaloboky izay mahalala hoe rahoviana ary aiza no tsy maintsy maka ny sampana tsy salama ary maty mba hahafahantsika mitombo fatratra sy matanjaka amin'ny lalana marina. Mazava ho azy fa manao izany izy mba hamoa voa tsara. - tratrarintsika izany vokatry ny fisian'ny Fanahy Masina eo amin'ny fiainantsika. Mampiseho izany amin'ny: fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharetana, hatsaram-panahy, hatsaram-panahy, tsy fivadihana, fahalemem-panahy ary fifehezan-tena. Toy ny divay tsara, ny fanovana ny fiainantsika, avy amin'ny sambo simba mankany amin'ny asa famonjena, dia mila fotoana ela. Ity làlana ity dia mety ahitana traikefa sarotra sy mampahory. Soa ihany fa manana Mpamonjy mahari-po sy hendry ary be fitiavana isika izay sady voaloboka sy mpamia divay ary mitarika ny fizotran'ny famonjena antsika amin'ny fahasoavana sy ny fitiavana.